Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo Maanta Kormeeray Xarunta Ciidamada Badda Somaliya – Radio Daljir
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo Maanta Kormeeray Xarunta Ciidamada Badda Somaliya
Abriil 21, 2015 10:12 b 0
Talaado, Abriil 21, 2015 (Daljir) —Wasiirka Difaaca Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, oo weheliyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Difaaca Mudane Cabdalla Xuseen Cali, ayaa maanta kormeer howlleed ku tagey xarunta Ciidamadda Badda Soomaaliya, taas oo ku taala Dekaddii hore ee Muqdisho, isagoona kormeray qalabka iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan Ciidamadda Badda.
Wasiirka ayaa ugu horeyn booqday doomo ay leeyihiin Ciidamadda Badda, kuwaas oo dhawaan la filayo in ay door ka qaadan doonaan sugidda ammaanka xeebaha Soomaaliya taliyaha Ciidamada Badda Dowladda Federaalka Admiral Maadey Nuurey Sheekh Ufurow, ayaa warbixin ka siiyey Wasiirka doomaha iyo sida ay u shaqeeyaan, isagoo xusay in ay mar dhow bilaabi doonaan shaqooyinkii loogu talagalay.
Taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay sanadihii ugu danbeeyay Ciidamadda Baddu in ay sameynayeen horumar, hadana loo baahan yahay in kor loo qaado tirada iyo tayada ciidamadda Badda, si ay ciidanku u noqdaan kuwa ay u dhameystiran yihiin adegyadii guud ee ku howl galayeen.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya Mudane C/qaadir Sh. Cali Diini, ayaa boggaadiyey horumarka ay sameeyeen Ciidamadda baddu, isagoo xusay in Wasaaraddu ay door muuqda ka qaadan doonto horumarinta ciidamadda Badda Soomaaliya oo kamid ah ciidamadda laf-dhabarta qaranka ah.
“Waxaan boggaadinayaa horumarka ay sameynayaan ciidamadda Baddu, runtii meel hoose ayaa laga soo bilaabay shaqada, maanta waxaa la isticmaalaya doomaha dheeraya oo ku rabin yahay qalab casri ah, taasi waxay marqaati cad u tahay sida ay nooga go’an tahay inaan gaarno Soomaaliya leh awood ciidan, gaar ahaan Ciidamadda Badda oo iyagu kamid ah kuwa ugu muhiimsan qaranka” ayuu yiri Wasiirka Difaaca.